I-CasaLucía - Igumbi lezivakashi - I-Airbnb
I-CasaLucía - Igumbi lezivakashi
Puchberg am Schneeberg, Niederösterreich, i-Austria
Ikamelo e-izindawo zokuhlala e-cuba ibungazwe ngu-Philipp
Thina, Philipp&Teresa&Marlon (3), singathanda ukukwamukela ku- "Casa Lucía" indlu enkulu, ethokomele futhi enobungane phansi kwentaba ebizwa ngokuthi yi-Schneeberg.
Noma nini lapho ufika, uzokubingelela.
Esitezi sesibili uzothola ikamelo lakho, elinombhede olala abantu ababili, usofa, indawo yokusebenzela encane kanye ne-waredrobe enkulu.
Uyamenywa ngemfudumalo ukuthi uphumule ku-saloon ngenkomishi yetiye ephambi kwendawo yokubasa umlilo, ukugeza ngegwebu namakhandlela noma ukulungiselela ukudla kwakho nge-veggis engadini!
I-Casa Lucía iseduze ne-Puchberg, futhi iseduze kakhulu nentaba namahlathi. Vele unqamule idlelo eliluhlaza, udlule izinkomo namahhashi futhi uzozithola usolwandle olusha, "oluhlaza". ;)
Esitezi sokuqala uzothola enye indlu yangasese nekhishi elinakho konke, lapho ungazizwa ukhululekile ukupheka nokusebenzisa konke. Sicela ushiye konke kuhlanzekile futhi usebenzise izinto ngokucophelela.
Uma ushiya ikhishi ungajabulela umoya ofudumele, okhanyayo wegumbi lokuphumula. Beka umatilasi noma ujabulele incwadi kanye nenkomishi yetiye phambi kwendawo yokubasa umlilo. Esitezi sesibili, lapho kukhona khona ikamelo lezivakashi, uzothola futhi i- "Nirvana", ikamelo elikhulu neligqamile le-Yoga nokuzindla, ojabulele ukulisebenzisa, uma kwenzeka kumahhala. :)
Ngokukhethekile ehlobo, kodwa nasebusika ingadi enkulu inikeza amathuba amaningi okujabulela nokuphumula njengendawo yomlilo "yamapulangwe" amancane lapho ungaqala khona ukuphupha kuma-hammock. Uma ukulima kuhamba kahle futhi kuyinkathi efanele, umenywa ngemfudumalo ukunambitha izithelo nemifino emnandi, ukuze usize ukusetha ingadi yamasiko.
Umbhede omkhulu ongu-1, 1 usofa, 1 umbhede wosana, Umbhede wengane e-1
Ukupaka okungakhokhelwa emagcekeni – izikhala ezingu-3
Umgwaqo omncane oya ngqo entabeni, uzoholela ku-Casa Lucwagena. Omakhelwane bethu banobungane kakhulu (ngokukhethekile omakhelwane bethu abaqondile abangu-6). Uma umi phambi kwendlu uzobona i-Schneeberg. Kulapha ngempela futhi uzizwa inkululeko yemvelo.
Mein „Lebensmotto“ ist „Vielfalt statt Einfalt“ und so bietet mir Reisen die Möglichkeit eine große Vielfalt an Landschaften und Kulturen kennen zu lernen. Aber auch Wien ist für dieses Motto genau die richtige Stadt, denn hier treffen viele verschiedene Kulturen aufeinander, lernen von einander und bilden den typischen „wiener Charme“.
Ich freue mich dich als Gast oder Gastgeber kennen zu lernen und neue Erfahrungen zu machen!
Mein „Lebensmotto“ ist „Vielfalt statt Einfalt“ und so bietet mir Reisen die Möglichkeit eine große Vielfalt an Landschaften und Kulturen kennen zu lernen. Aber auch Wien ist für d…
Kithi, kubalulekile ukuthi ujabulele uhambo lwakho nokuhlala kwakho lapha e-Casa Lucwagena, phakathi kwemvelo enhle, enamathuba amahle. Ngakho-ke, uma Unohlelo lwakho, njengokugibela intaba noma ukwenza uhambo oluya empophweni noma, uma unezinhlelo ezithile zokudla noma, uma ufuna ukuvala noma uhlobo lokuzindla noma ukuhlala uthule, sicela usazise kusengaphambili futhi sizothola indlela enhle nekahle.
Ngakho-ke, engizama ukusho ukuthi, ukudansa kuncike kusethingi oyikhethayo futhi nakanjani, isimo samanje esisodwa.
Thina, Philipp&Teresa&Marlon, singabantu abanengqondo evulekile futhi abanenhliziyo evulekile futhi sithanda ukwazi amanye amasiko noma izindawo ezintsha zokubuka! ;D
Kithi, kubalulekile ukuthi ujabulele uhambo lwakho nokuhlala kwakho lapha e-Casa Lucwagena, phakathi kwemvelo enhle, enamathuba amahle. Ngakho-ke, uma Unohlelo lwakho, njengokugibe…
Hlola ezinye izinketho ezise- Puchberg am Schneeberg namaphethelo